USIR IAN MCKELLEN KWAKUFUNEKA AKHETHE PHAKATHI KWEMAGNETO KUNYE NEGANDALF - GANDALF
Dan Ebomini Bokwenyani
Ukhozi Lweminyaka Eliwaka
Mhlekazi uIan McKellen Ekuqaleni kwakufuneka akhethe phakathi kweMagneto kunye neGandalf
Alanna i-movie yokuqala ye-adventure
Uvile ngoKhetho lukaSophie, akunjalo? Ewe ndicinga ukuba kuya kufuneka siqale ibinzana elitsha le-geek-Ukhetho lukaMcKellen. Mnumzana Ian McKellen , umdlali weqonga onomdla kwakhona kodwa owaziwa kakhulu kubalandeli njengoGandalf osuka INkosi yeeRingi kunye neMagneto ukusuka X-Amadoda , kutshanje kutyhilwe ukuba ngexesha elinye, yayiyindima enye okanye enye, hayi zombini.
Inkqubo ye- INew Zealand Herald ithi ukutyhilwa okukhulu kuza nombulelo ku INkosi yeeRingi Isikhumbuzo seminyaka eli-10 esikhethekileyo kuhlelo lukaDisemba lweMagazini i-Empire. UMcKellen uvumile ukuba ekuqaleni wawala umnikelo kaPeter Jackson nangona wayesazi ukuba ukudlala iGandalf yayiyindima yobomi bonke.
Ngeloxesha ndandizokudlala iMagneto kwi X-Amadoda Ifilimu eToronto, uxelele uBukhosi. Besele ndizimisele kuloo nto… kwaye oko kuthetha ukuba andinakufika eNew Zealand kwangexesha. Ke kuye kwafuneka ndixelele uPeter ukuba andisakwazi ukwenza iGandalf.
Ungquzulwano olulula lweshedyuli lunokusibiza ngeGandalf yethu emangalisayo kodwa aluzange lubulele kwintlanganiso yamathuba kwindawo yokutyela eLondon nomphathi weNew Line Cinema Bob shaye . UMcKellen walibalisa ibali, Wathi, ‘Ndiyakuva ukuba uzakuba semuvi yethu.’ Ndaze ndathi, “Hayi, akusekho njalo.” Kwaye wathi, ‘Yintoni ingxaki?’ Ndaye ndacacisa. Uthe nje, 'Yiyekele kum loo nto.'
umatiloshe wenyanga english dub cast
Yeyona nto ibalaseleyo awakhe wandenzela yona, ngenxa yokuba basebenze ngaphandle kwenyanga ezintathu zokuqala, utshilo, yile nto ndiyikhumbulayo ngokuqala kwayo - indlela endandiphantse ukungayidlali ngayo iGandalf! Enkosi Bob Shaye, enkosi ngokusuka kwintliziyo yam yokufunda ubumnandi.
Andikwazi nokucinga ukuba ngekwenzekani ukuba uMcKellen akakhange adlale iGandalf, he IS Gandalf. Ungayichazanga eyokuba, ndiyamangaliswa kakhulu ukuba ebeya kukhetha uMagneto ngaphezulu kwakhe kodwa kwakhona ebekunokuthanani ngakumbi nezivumelwano esele zisayiniwe X-Amadoda ngaphezu kwayo nayiphi na enye into. Nokuba yeyiphi, konke kulungile kwaye siza kubona uMcKellen ephinda eyidlala indima yakhe njengewizard eneefolokhwe ezithandekayo IHobbit kunyaka olandelayo.
(nge Ukutyabeka )
Ujohn De Lancie
fallout 4 eyindoda okanye eyahlukileyo ibhinqa
I-voltron yipidge intombazana
ukumkanikazi we tattoo esemazantsi
denzel washington kunye no-barack obama
loluphi uvavanyo lwenene lwe-iq
ingonyama yofudo avatar iairbender yokugqibela